संसारको धनीमा बिल गेट्सलाई पछाडी पारे जेफ बेजोसले, कस्को सम्पत्ती कति ? – Arthatantra.com
संसारको धनीमा बिल गेट्सलाई पछाडी पारे जेफ बेजोसले, कस्को सम्पत्ती कति ?
काठमाडौं । अनलाइन बुक स्टोर अमेजनका मालिक जेफ बेजोस विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति भएका छन् । बेजोसले एक वर्षयता प्रत्येक दिन ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको बताइन्छ । सुरुवाती दिनमा बेजोस इन्टरनेटको सहयोगमा पुस्तक बेच्थे । यही व्यवसायलाई अघि बढाउँदै उनले अमेजन नामक ई–कमर्स कम्पनी स्थापना गरे । पछि यो कम्पनीले विभिन्न प्रकारका व्यवसाय समेत गर्न थाल्यो ।
बेजोस अहिले अन्तरिक्षमा रकेट पठाउने व्यवसायमा समेत लागेका छन् । त्यसैगरी ब्लू ओरिजिन नामक कम्पनीमा समेत उनको लगानी छ । बेजोस प्रत्येक वर्ष अमेजनको १ अर्ब डलरको सेयर बिक्री गरेर ब्लू ओरिजिनमा लगानी गरिरहेका छन् ।
बेजोसले सन् १९९४ मा न्युयोर्कदेखि सियाटलसम्मको भ्रमणपश्चात् अमेजन डटकम स्थापना गरेका थिए । अमेजनको व्यापारिक योजना पनि उनले त्यही भ्रमणका क्रममा बाटैमा गरेका थिए । यो कम्पनीको सुरुवात उनले आफ्नो ग्यारेजमा गरेका थिए ।
बेजोसले आफ्नो कुल सम्पत्तिका साथ माइक्रोसफ्का सहसंस्थापक बिल गेट्सलाई पछाडि छाडेका छन् । अमेरिकी अखबार ‘फोब्र्स’ का अनुसार अमेजोनको सेयरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भै बेजोसको कुल सम्पत्ति ९३ करोड डलरले माथि उक्लिएको छ । यो रकमसँगै उनी विश्वकै नम्बर वान अर्बपति भएका हुन् । हाल उनको सम्पत्ति ९३ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो रकम अर्बपति बिल गेट्सको सम्पत्ति ८९ दशमलव ९ अर्ब डलरभन्दा केही मात्र बढी हो ।
बेजोसले हालै अमेरिकामा सबैभन्दा महँगो ग्रोसरी चेन ‘होल फुड्स’ खरिद गरेका थिए । यसले पनि बेजोसको सम्पत्ति बढाउन सहयोग पुर्‍याएको बताइन्छ । ग्रोसरीबाट उनले एकैपटकमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर कमाएका थिए ।
बिल गेट्सलाई बेजोसले सम्पत्तिमा पछाडि पारेको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि जुलाई २८ मा पनि केही समय मात्र भए पनि उनले गेट्सलाई उछिनेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४
कार्कीलाई कृषिबाट फलिफाप, एक हजारको लगानीबाट एक करोडको सम्पत्ति – ध्रुवसागर शर्मा म्याग्दी । आजभन्दा ४० वर्ष पहिले ‘विदेश पनि जान्न, जागिर पनि खान्न’ […]
एक अर्बको म्युचुअल फण्ड आउदै, तयार हुुनुहुन्छ लगानी गर्न ? काठमाडौ । सर्वसाधारणको लागि ८ करोड ५० लाख ईकाइमा लगानी खुल्ला गर्दै १ अर्ब रुपैयाको […]
कस्लाई कति पर्यो ? हेर्नुहोस सानिमा क्यापिटलको इक्विटी फण्ट बाँडफाँट काठमाडौं । योजना ब्यबस्थापक सानिमा क्यापिटल लिमिटेडद्धारा सञ्चालन हुने सानिमा म्युचुअल […]
लघुवित्तको तीन लाख कित्ता आईपीओ आउँदै, विक्रि प्रबन्धक तोकियो काठमाडौं । सामसदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण सेयर (आइपीओ) निस्काशन […]
आजैदेखि खुल्यो लघुवित्तको बजार मुल्य १२३९ रुपैयाँ पर्ने सेयर सयमै लिलामीमा काठमाडौं । हकप्रदमा अवितरित संस्थापक तथा साधारणगरी झण्डै दुई लाख कित्ता सेयरको लिलामी […]